Kekọrịta faịlụ na-enweghị aha na Volafile.lo | Akụkọ akụrụngwa
Volafile.io bụ ọrụ igwe ojii nke raara nye ndị nwere ụfọdụ - faịlụ isoro ndị ọrụ ndị ọzọ kerịta, nke a na-enweghị mkpa ịdebanye data gị, ọnọdụ dị iche na ya na nke yiri nke, mgbe ị na-emepụta akaụntụ akọwapụtara nke ọma, ọ bụ iwu na-enweghị atụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Google ị nwere ike iji Drive, ma ọ bụ Skydrive ọ bụrụ na ị nwere ọrụ debanyere aha na Microsoft; ihe atụ ndị a nke igwe ojii na nnabata na-agụnye DropBox ma ọ bụ Mega, nke ikpeazụ na-enye 50 GB nke nchekwa nchekwa. Enwere ike ịsị na Volafile.io na-arụ ọrụ "na-efegharị", n'ihi okike nke ụlọ ebe onye ọ bụla nwere ike ịbanye iji rụkọta ọrụ, na-ekerịta ozi nwa oge na-enweghị aha.
Otu dị iche iche na ime ụlọ ịkekọrịta faịlụ na Volafile.io
Ikekwe anyị nwere ike icheta ihe dịbu adị karịa afọ iri gara aga mgbe ụlọ izizi mbụ nke ịntanetị bidoro, ebe onye ọrụ nwere ike ịba gburugburu ndị a na ebumnuche nke izute ndị enyi; n'okwu a, ebumnuche nke Volafile.io bụ ịkekọrịta akwụkwọ ma ọ bụ faịlụ, inwe ike ịbụ mp3, vidiyo vidiyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịdị mkpa. Enweghi oke ma ọ bụ mmachi mgbe ị na-abanye ụlọ ndị a iji kesaa ozi, bụrụ ihe na-enweghị njedebe nke onye ọ bụla nwere ike ịnabata. Ugbu a, ụfọdụ n'ime faịlụ ndị a nwere ike ịlele ozugbo iji hụ ma ha nwere mmasị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị, nke ga-adaberekarị na ụdị ihe nchọgharị anyị ji, dịka ụfọdụ nwere ike kwe ka playback nke faịlụ mp3 ma ọ bụ ngosipụta nke onyonyo ma ọ bụ ezigbo oge foto. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ akwadoghị atụmatụ a, onye ọrụ a kpọrọ òkù ga-etinye ihe egwu ibudata ihe akọrọ ebe ahụ, ịga n'ihu n'ụzọ nkịtị mgbe anyị chọrọ ibudata faịlụ na Internetntanetị, ya bụ, were menu nke aka nri anyị na nhọrọ nke nhọrọ «ịzọpụta njikọ As«; Ọ bụrụ na a na-akọrọ ụdị faịlụ dị iche iche n'ime ụlọ (na mgbakwunye na multimedia), nke a nwere ike ịbụ nnukwu uru mgbe ị na-achọ ịchọta ihe masịrị anyị.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnwe ndị na-emekọ ihe ọnụ na -ekekọrịta ma vidiyo na vidiyo, faịlụ (nke nwere ike ịbụ egwu), akwụkwọ ederede, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na egosiri ọnọdụ ahụ n'ụzọ dị otu a na otu ma ọ bụ ụlọ ahụ, mgbe ahụ ọ ga-enwe mmasị na nke ahụ na elu enwere obere nhọrọ mmanya, ole ebe na udi ga-amata a ụdị faịlụ.
Ọ ga - ezuru iji pịa ụdị edemede ọ bụla egosipụtara na mmanya iji nwee ike ịmasị faịlụ ndị ahụ niile ejiri njirimara ndị a. Na mgbakwunye na ya, gaa n'akụkụ aka nri nke ụdị udi anyị kpọtụrụ aha bụ obere injin nchọta ihe, ohere nke anyị ga-ede naanị aha vidiyo, ọdịyo, ngwa ma ọ bụ akwụkwọ nke anyị nwere mmasị na ya, inwe ike igosipụta otu, ọtụtụ na ikekwe enweghị nsonaazụ dabere na ihe ekesara ebe ahụ; Dịka ọ bụ ụlọ ma ọ bụ otu ndị ọrụ nwere mmasị n'otu isiokwu mepụtara, onye nrụpụta ọrụ Volafile.io a hụrụ na o kwesịrị itinye windo ọzọ ka ndị otu otu wee nwee ike ikwurita ozi; Maka nke a, n'akụkụ aka ekpe nke interface anyị nwere ike ịchọpụta na enwere obere ngalaba iji kparịta ụka, ebe ị nwere ike ịgwa ndị otu ahụ ma ọ bụ otu onye ọrụ akọwapụtara, gbasara ụdị ụfọdụ akwụkwọ nwere mmasị .
Ugbu a, na mmalite nke isiokwu anyị kwuru nke ahụ ọrụ a bụ ụdị nnabata nwa oge na igwe ojii, ihe a na-egosi n'ụzọ zuru ezu ebe ọ bụ na faịlụ ndị a ga-ekekọrịta na sava ha ga-enwe oke ikikere nke awa 12, nke bụ ya mere, ozugbo a chọtara otu pụrụ iche, a ga-ebudata ha. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na a na-akọrọ nnukwu faịlụ, mkpa ọ dị inwe njikọ goodntanetị dị mma iji budata ya dị mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ọtụtụ ndị otu nwere mmasị ibudata otu faịlụ ahụ, nke a nwere ike ịnabata ọrụ ahụ.
Ozi ndị ọzọ - Etu esi ekekọrịta faịlụ na Google Drive mfe, Microsoft weputara SkyDrive app nke Windows Phone 7 na iOS, Ọrụ MEGA Bochum, gịnị kpatara iji ya na ndị ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Volafile.io na-ekekọrịta faịlụ na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweghị aha